Ankara Sivas Haingam-pandeha amin'ny haingam-pandeha ambony haingam-pandeha notondroina | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Ankara Sivas Haingam-pandeha momba ny lamasinina haingam-pandeha notanterahina
09 / 01 / 2020 Ankara 06, 58 Sivas, Central Anatolia, Railway, ANKAPOBENY, Fast train, Headline, TORKIA, VIDEO
Vita ny fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony vita ankara siva
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan, "sisin'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony misy 393 kilometatra ny halavam-pandehanana lava any Ankara-Sivas ao amin'ny ampahany amin'ny Bişeyh - Yerköy - Akdağmadeni tamin'ny volana martsa hanombohana ny fizotran'ny fitsapana sy hamita ilay tetikasa amin'ny ampahefatry ny taona 2020," hoy izy.
Tao anatin'ny faritry ny Tetikasa Ankara-Sivas High Speed ​​Train (YHT), ny fitaterana ny lalamby dia mitohy amin'ny lalana Yerköy-Sivas. 87 isanjaton'ny asa no ho vita amin'ny asa fametrahana ny lalamby, ny sisa tavela dia ho vita amin'ny Martsa 2020, ary avy eo dia hanomboka ny fanodinana test.
Ny governemantan'i Yozgat Kadir Cakir, ny lalamby amin'ny fananganana ivontoerana fananganana amin'ny alàlan'ny fisafoana ny mpikarakara ny tetik'asa Mehmet Başer'den dia nahazo vaovao. Yozgat Divanli Yozgat Station sy ny fananganana ny mpitari-dalana mitohy ary DGS stabilazitor mpanao gazety miaraka amin'ny diany 40 kilometatra ny fitsangatsanganana an-trano Yozgat Kadir Cakir, 2020 dia ho vita amin'ny volana martsa ary nilaza fa hanomboka ny fizotran'ny fanandramana.
Nipoitra ny Faritry ny tonelina tao Ankara-Sivas
Ny filazana fa ny Tetikasa YHT Ankara-Sivas dia fampiasam-bola lehibe, hoy i Çakır, efa niandry ela i Y Yozgatlı. Hita izao ny faran'ny ny tonelina. Nanomboka niadana izahay ary nanantena ny hahatongavantsika haingana. Fampiasam-bola mitentina 13,2 miliara, misaotra an'izay rehetra nandray anjara. Mandeha ny lalamby. Napetraka tao Yerköy-Yozgat-Sorgun ny Rail. Akdagmadeni distrika no napetraka. 87 isan-jaton'ny asa no vita, ary ny ambiny dia asaina ho vita amin'ny Martsa 2020. Dia hanomboka ny fitiliana fitsapana. Yozgat dia tanàna manana hatsarana maro, eo amin'ny lafiny geothermal sy ara-tantara. Handray anjara amin'ny fampiroboroboana ny tanànantsika sy ny fananganana fampiasam-bola ara-toekarena. Tsy mifarana eo ny tantara. Asa goavana izany. Sitrapon'Andriamanitra, avelao isika hiara-hihaona ary hiara-hankafy miaraka. ”
Tao anatin'ny ambaratongan'ny fandaharan'asan'ny lalamby, ny Governemanta Çakır dia niaraka tamin'ny Komandin'ny komandin'ny zandarimariam-paritany ny filoham-pirenena Bilgihan Yeşilyut sy ny Lehiben'ny Polisy ao amin'ny Soner Özyer.
Rehefa vita ny tetikasa dia hampihena ny Sivas-Ankara mandritra ny adiny roa ary Ankara-Yozgat adiny iray eo ho eo. Tetikasa YHT Ankara-Sivas, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars fiaran-dalamby haingam-pandeha dia hampidirina ao anaty lalamby Baku-Tbilisi-Kars.
Sarintanin'ny fiaran-dalamby any Ankara Sivas
Sarimihetsika fampidirana haingam-pandeha ambony Ankara Sivas
Ny tetikasa lalovan'i Train High School Ankara Sivas farany
3. Tapitra ny daty farany amin'ny tetezana!
Nambara ny Kanuni Boulevard tao Trabzon
Tetikasam-piofanana nasionalin'ny fiaramanidina haingana
TCDD Istanbul-Ankara Tetikasa hafainganam-pandeha haingam-pandeha Geyve-Sapanca (Doğançay Ripage)…
Ankara Sivas Haingam-pandeha ambony haingam-pandeha fanamboarana fotodrafitrasa faha-2 amin'ny asa fanamboarana fotodrafitrasa
Ny fanambaràna ny tetikasa Marmaray dia nambara
Ny daty fanokafana ny tetikasa Marmaray dia nambara.
TCDD Polatlı - Electrification Proy High Speed ​​Train Konya
Daty fanaraha-maso ny daty Ankara Sivas YHT tsipika efa notondroina
Building Building Construction